Aroos-wadareed ballaadhan oo ka dhacay Koonfurta kuuriya oo loo sameeyey dad ka soo jeeda Waqooyiga Kuuriya!
Jul 01, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Aroos-Wadareed ballaadhan ayaa loo sameeyey dadka ka soo faquuqmay ee ka soo jeeda dalkaasi Waqooyiga Kuuriya,waxana uu ka dhacay Aroos-wadareedkani dalka Koonfurta Kuuriya.100 lammaane ayaa la soo...
Tareenka dalka Japan ee u sameysan qaabka rasaasta oo qof isku dhex gubay!
Jun 30, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Laba qof ayaa ku dhex dhintay mid ka mid ah,Tareenada dalkaasi Japan,gaar ahaan nooca loo yaqaano(Rasaas u ee kaha),markii uu dab qadsaday.shilkanina waxa uu dhacay markii tareenka qof la socday oo...
Xeer ilaaliyihii Qaranka Masar oo qarax baabuur lagu dilay!
Jun 29, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Xeer-ilaaliyihii qaranka ee dalkaasi masar ayaa lagu dilay qarax baabuur lagu soo rakibay oo ka dhacay caasimadda dalkaasi masar ee Qaahira.masuulkan oo magaciisa la odhan jiray(Hishaam Barakaat)...
Qiimaha iyo faa’iidada ay leeyihiin Akhriska iyo Qoraalku!!!
Jun 29, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka, Waxbarasho 0
Akhriska iyo Qoraalku waa laba shay oo mataano ah,marka wax la qoro ayaa la akhriyaa, dhinaca kale qofku marka uu barto qoraalka ayuu wax akhriyi karaa ama uu wax akhrisan karaa.hadaba,maanta waxa...
Diyaaradda Qoraxda ku shaqeynaysa oo sameysay tijaabadeedii labaad!
Diyaaradda Solarta ku shaqeyneysa ayaa waxay ka duushay,gagada Nagoya ee ku talla Japan 6 lixdii galabnimo maalintii Axaddii, waxana qorsheysan in ay ku dagto gobolka Hawaay, 120 saacadood ka...
Saameynta xun ee uu ku yeeshay Dagaalka Suuriya…(Jiilka la waayey)!!
Jun 28, 2015 cabdicasiis mohamed Dhacdooyin, Wararka 0
Shan sano ayaa ilaa hadda ka soo wareegtay markii uu bilaabmay dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya. taas oo uu kaga tagay ama uu ku yeeshay “Raad-xun” jiilkii soo koraayey ee dalkaasi,iyo...
Midabada ay Ramadaantu leedahay Caalamka Islaamka dhexdiisa!
aragtiwanaagsan.com…office..hargeysa. nagala soo xidhiidh: emailkan;aragtiwanaagsan@gmail.com…ama 063 4175733 ama 065 9042739. cabdicasiis mohamed